लियोनार्ड कोहेन - Safal Stories
Home Motivational Biographies Art लियोनार्ड कोहेन
यदि मेरो दिमागमा हिजोअस्तिको कुरा छ भने मैले नयाँ कुरा कसरि सोंच्न सक्छु ? नयाँ कुराको सुरुवात कसरि गर्न सक्छु ?
लियोनार्ड कोहेन एक प्रसिद्ध गायक तथा लेखक थिए । उनी गीत ,कविताका साथै उपन्यास पनि लेख्दथे । क्यानेडियन नागरिक लियोनार्ड कोहेनको जन्म सन् १९३४ सेप्टेम्बर ३१ मा भएको थियो ।
लियोनार्ड कोहेनको जन्म क्यानडाको क्युबेकमा भएको थियो । उनका बुवाको नाम नेथन कोहेन थियोनाम र आमाको नाम मार्षा थियो । लियोनार्ड नौ वर्षका हुँदा नै उनका बुवाको मृत्यु भएको थियो ।
सन् १९४८ मा रोसलिन एलिमेंट्री स्कूलबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिएपछि उनी वेस्टमाउन्ट हाइ स्कूलमा भर्ना भएका थिए । त्यहाँ उनले कविता र संगीत विषयमा अध्ययन गर्ने मौका पाए । लियोनार्ड स्पेनिस कवि फेडेरिको गार्सिया लोह्काद्वारा लिखित रचनाहरु मन पर्दथ्यो ।किशोरअवस्थामा उनले गितार बजाउने तालिम पनि लिएका थिए । सन् १९५१ मा उनी मेकगिल युनिभर्सिटीमा भर्ना भए, जहाँ उनी मेकगिल युनिभर्सिटी युनियनका अध्यक्ष पनि रहे । युनिभर्सिटीको पढाइका समयमा उनले “स्पेरोज” र “थट अफ अ ल्यांड्सम्यान” कविता लेखेर “चेस्टर म्याकनटेन लिट्ररी कम्पिटिसन” को विजयी बनेका थिए ।
साहित्य तथा कला यात्रा
सन् १९५४ मा लियोनार्डले लेखेका कविताहरु “सी आइ भी /एन ” पत्रिकाले प्रकाशन गरेको थियो । उनी वाल्ट व्हाइटम्यान, विलियम बटलर यिट्स ,अर्भिंग लेटन र फेडेरिको गार्सिया लर्का जस्ता साहित्यिक व्यक्तित्त्वहरुबाट प्रभावित थिए । सन् १९५६ मा उनले आफ्ना स्वर्गीय बुवाप्रति समर्पित गर्दै कविता संग्रह “लेट अस कम्पेयर मिथोलोजिस” प्रकाशन गरेका थिए । सन् १९५५ मा कला विधातर्फ स्नातक गरेपछि लियोनार्डले “मेकगिल युनिभर्सिटी अफ ल” मा अध्ययन गरे । पछि उनी न्युयोर्क गए र ” स्कूल अफ जनरल स्टडिज एट कोलम्बिया युनिभर्सिटी” मा भर्ना भएका थिए ।
सन् १९५७ मा लियोनार्ड क्यानाडा, मोंट्रियल फर्केर जागिर शुरु गरे । फुर्सदको समयमा उनले कविता र काल्पनिक कथाहरु लेख्ने गर्दथे । सन् १९६१ मा क्यानडाको एउटा प्रकाशन कम्पनि “मेक्लल्याण्ड एण्ड स्टेवार्ट” ले लियोनार्डद्वारा रचित कविताहरुको संग्रह ” ड स्पाइस बक्स अफ अर्थ ” प्रकाशित गर्यो । जसलाई पाठकहरुले औधि मन पराए र लियोनार्ड कोहेन एक क्यानडियन कविको रुपमा परिचित बने । सन् १९६० को दशकमा उनले थुप्रै कविता,कथा,उपन्यासको रचना गरे ।
लियोनार्ड द्वारा रचित उपन्यासहरु “द फेब्रेट गेम” र “बियुटीफूल लुजर्स” अनि कविता संग्रहहरु “फ्लावर्स फर हिटलर”,”पारासैट्स अफ हेभन ” र “सेलेकटेड पोएम्स १९५६ -१९५८” त्यतिबेला प्रकाशित भएका थिए । सन् १९६० को दशकको अन्त्यतिर लियोनार्डलाई कविता र कथाका साथै गीतहरु पनि लेख्ने र गाउने रुचि जाग्यो जसका लागि उनी अमेरिका गए । अमेरिकन कलाकार जुडी कलिंसले गाएको गीत “सुजेन” लियोनार्डले रचना गरेका थिए, जुन गीत निकै प्रसिद्ध भएको थियो । एक गायककार पनि बन्ने उद्धेश्य लिएका लियोनार्डलाई चाडपर्वहरुमा गीत गाउँदै गर्दा जन एच हयामंडले देखे र कोलम्बिया रेकर्डसमा उनलाई काम दिए । सन् १९६७ मा उनको पहिलो गिती एल्बम “संग्स अफ लियोनार्ड कोहेन” रिलिज भयो जुन एल्बमले निकै प्रशंसा बटुल्यो र रिलिज भएको एक वर्ष सम्म पनि यु के को प्रसिद्ध चार्ट लिस्टमा कायम थियो । त्यसपछि उनका अरु गिती एल्बम “संग्स फ्रम अ रूम” र “संग्स अफ लभ एण्ड हेट” रिलिज भएका थिए ।
सन् १९७० को दशकको शुरुमा लियोनार्ड टुरका लागि निस्किएका थिए । एउटा टुर अमेरिका ,क्यानडा र युरोपको थियो भने दोस्रो टुर युरोप र इजरायलको थियो । त्यसै दौरान उनले एउटा किताब “द इनर्जी अफ स्लेभ्स” पनि प्रकाशन गरे । सन् १९७४ मा अमेरिकन म्युजिक निर्माता जन लिसावरले लियोनार्डको नयाँ गिती एल्बम “न्यु स्किन फर ओल्ड सेरेमोनी ” मा संगै काम गरे र प्रोमोसनका लागि अमेरिका ,क्यानडा र युरोपको टुरमा पनि गए । सन् १९७५ मा लियोनार्ड र लिसावरको जोडीले अर्को गिती एल्बम ” द बेस्ट अफ लियोनार्ड कोहेन ” बजारमा ल्यायो जसको विज्ञापनका लागि उनीहरु विभिन्न टुरमा निस्किएका थिए । सन् १९७७ मा उनको अर्को एल्बम “डेथ अफ अ लेडिज मेन ” रिलिज भएको थियो र एक वर्षपछि सोहि नामको किताब पनि प्रकाशित भएको थियो ।
सन् १९७९ मा लियोनार्डले अर्को गिती एल्बम “रिसेन्ट संग्स” को रिलिज गरे जसका निर्माता उनी आफै थिए । सन् १९८४ मा रिलिज भएको उनको नयाँ कविता संग्रह “बुक अफ मर्सी” ले निकै चर्चा कमायो र लियोनार्डको लेखन कलाको प्रशंसा भएको थियो । त्यसै वर्ष उनले गीति एल्बम “भेरियस पोजिसन्स” र “आइ एम योर म्यान ” पनि रिलिज गरेका थिए । सन् १९९० को दशकमा लियोनार्डका रचना “स्ट्रेन्जर म्युजिक:सेलेक्टेड पोएम्स एण्ड संग्स ” प्रकाशित भएको थियो । त्यसपछिको अर्को दशकमा “बुक अफ लंगिंग” , “द लिरिक्स अफ लियोनार्ड कोहेन” र “पोएम्स एन संग्स” जस्ता कृतिहरु प्रकाशित भए । त्यतिबेला उनले “द फ्युचर” नामको गिती एल्बमको रेकर्ड पनि गरेका थिए ।
सन् २००१ देखि सन् २००४ सम्म लियोनार्डले दुई वटा गिती एल्बम “टेन न्यु संग्स” र “डियर हेदर” को रिलिज गरे । सन् २०१२ मा उनले “फिफटिन पोएम्स ” कविता संग्रहको रचना गर्नुको साथै गिती एल्बम “ओल्ड आइडियाज” को रेकर्ड पनि गरे । सन् २०१४ मा उनको प्रसिद्ध एल्बम “पपुलर प्रब्लम्स” रिलिज भयो जुन एल्बमले जुनो अवार्ड्स अन्तर्गत एल्बम अफ द अवार्ड जितेको थियो । सन् २०१४ मा लियोनार्ड असी वर्षका पुगे पनि उनले आफ्नो कलायात्रालाई निरन्तरता दिइरहे । शरीर बूढो र रोगी भैसकेको भएता पनि सन् २०१५ मा उनले नयाँ एल्बम “यु वान्ट इट डार्कर” मा काम शुरु गरे जसमा मृत्यु,भगवान र हास्य विधा सम्बन्धि शब्दहरु समावेश छन् । सो एल्बम सन् २०१६ अक्टोबर १६ मा रिलिज भएको थियो र एल्बम रिलिज भएको १९ दिन पछि नोभेम्बर ७ मा बयासी वर्षको उमेरमा लियोनार्डको मृत्यु भएको थियो ।
सन् १९९१ मा लियोनार्ड कोहेनलाई क्यानाडियन म्युजिक हल अफ फेमले सम्मान गरेको थियो । सन् १९९३ मा जुनो अवार्ड द्वारा “बेस्ट मेल भोकलिस्ट” अवार्डबाट सम्मान्नित भए । सोही वर्ष उनले “गभर्नर जनरल्स पर्फर्मिंग आर्ट्स अवार्ड” पनि पाए । सन् १९९४ मा जुनो अवार्ड्सद्वारा “संग राइटर अफ द इयर “अवार्ड पाउन सफल भए । सन् २००३ मा अर्डर अफ क्यानडाले लियोनार्डलाई बधाई दिएको थियो । सन् २००६ मा उनलाई “क्यानाडियनसंग राइटर्स हल अफ फेम” द्वारा सम्मानित गरिएको थियो । सन् २००८ मा “एल्बम अफ द इयर” का लागि ग्रामी अवार्ड जितेका थिए । सन् २००८ मा उनलाई “रक एण्ड रोल फेम ” द्वारा सम्मान गरिएको थियो भने “नेसनल अर्डर अफ क्युबेक ” को ग्राण्ड अफिसर बनाइएको थियो ।
सन् २०१० मा लियोनार्डलाई “ग्रेमी लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड ” दिईएको थियो र “संग राइटर्स हल अफ फेम ” द्वारा पनि सम्मान गरिएको थियो । सन् २०११ मा उनी “प्रिन्स अफ एस्टूरिअस अवार्ड फर लिटरेचर ” बाट सम्मानित भए । सन् २०१२ मा उनले “पेन अवार्ड अफ संग लिरिक्स फर लिट्ररी एक्सिलेन्स ” पाए । सन् २०१३ मा जुनो अवार्डले उनलाई “आर्टिस्ट अफ द इयर “अवार्ड दिएको थियो । लियोनार्ड कोहेनलाई डल्हाउजि युनिभर्सिटी र मेकगिल युनिभर्सिटीले मानार्थ डिग्रीको उपाधि दिएका थिए । सन् १९७१ मा रिलिज भएको फिल्म मेक्केब एण्ड मिसेज मिलर मा निर्देशक रोबर्ट अल्टम्यानले कोहेनको पहिलो गिती एल्बम “संग्स अफ लियोनार्ड कोहेन” को तीन वटा गीतहरु समावेश गरेका छन् ।
Previousपोलो कम्पनीका मालिक राल्फ लरेनका सफलताका सुत्र
Nextजेनिफर लोपेजका प्रेरक भनाइहरु
फ्रेडरिक निज्चका प्रसिद्ध भनाइहरु January 4, 2020
दिमाग शान्त र सकारात्मक राख्नको लागि नगर्नुहोस् यी ८ काम January 3, 2020
वेन डायरका जीवनोपयोगी भनाइहरु December 26, 2019
२०१० देखि २०१९ सम्मका विश्वका सबैभन्दा प्रेरणादायी व्यक्तिको सुचीको पहिलो नम्बरमा पुष्पा बस्नेत December 25, 2019
अगाडी गएर बोल्दा लाग्ने डरलाई कसरि कम गर्ने ? साधारण तर प्रभावकारी ४ टिप्स December 24, 2019
बेन्जमिन डिजरेलीका प्रसिद्ध भनाइहरु December 23, 2019
एयरपोर्टमा सरसफाईको काम गर्ने व्यक्ति, जसले आफ्नो सपना छोडेनन् र बने...